अनुपयोगी रोबोट को रानी पूरा - समाचार नियम
अनुपयोगी रोबोट को रानी पूरा
स्वीडिश आविष्कारक, 'Shitty रोबोट को रानी' भनिन्छ, अनाज खाने वा लिपस्टिक लागू लागि उनको विचित्र contraptions संग अनुयायीहरूलाई हजारौं आकर्षित गरेको छ
शीर्षक यो लेख “बेकारी रोबोट को रानी पूरा: 'द इन्टरनेट एक अजीब ठाउँ छ'” एम्बर Jamieson द्वारा लेखिएको थियो, लागि बिहीबार 17 मार्च मा theguardian.com 2016 16.11 UTC
"Shitty रोबोट को रानी" को रूपमा जानिन्छ, स्विडिश आविष्कारक Simone Giertz रोबोट दैनिक गतिविधिहरु मद्दत गर्न बनाउछ - बाहेक, उनि काम छैन. खैर, mechanically तिनीहरूले सुन्दर काम, तर उनको रोबोट हामी स्वचालित छ हाम्रो जीवनको हरेक भाग अघि जान एक समय भयो देखाउन.
यो 25 वर्षीया स्टकहोम मा एक houseboat मा बस्छ र एउटा अत्यधिक सफल YouTube च्यानल चल्छ 124,000 सदस्यहरू, जहाँ उनको असली र उल्लसित contraptions को भिडियो पोस्ट, यस्तो उनको अनाज खुवाउन रोबोट रूपमा, उनको लिपस्टिक र टुकडे करो तरकारी धारण.
उनको हालैको भिडियो - एक किबोर्ड विरुद्ध बारम्बार banging एक टाउको - इन्टरनेटमा तर्क मदत गर्न छ.
त्यो आत्म-सिकाउनुभयो पूर्ण-समय shitty रोबोट निर्माता हुनुको बारेमा अभिभावक संग कुरा.
तपाईं निर्मित पहिलो रोबोट के थियो?
मेरो साथी जोनाथन Lönnqvist र म गरे यो आईफोन मामला त्याग दिन योग्य गिटार तार संग. भन्न अनावश्यक, यो एक राम्रो महत्वाकांक्षी पहिलो हार्डवेयर परियोजना थियो. म गरिएका पहिलो एक श्रेणी अन्तर्गत घोप्टो कि "shitty रोबोट" यो थियो टूथब्रश टोप.
के तपाईं रोबोट कसरी बनाउने सिक्न चाहन्छन् बनाएका?
किनभने म प्रोटोटाइप गर्न चाहेको विचार धेरै थियो. मेरो लागी, विचार म तिनीहरूलाई निर्माण गरेपछि मात्र टाढा जाने कि कष्टप्रद salespeople जस्तै हो.
तपाईं कलेजमा भौतिकी अध्ययन तर रोबोटिक्स मा मुख्य रूप आत्म-सिकाइएको. तपाईं आफैलाई कसरी सिकाउनुभयो?
सामान निर्माण गरेर! मेरो सिक्ने प्रक्रिया सधैं धेरै विचार-उन्मुख भएको छ. म एउटा किताब जस्तै रहेको संग बसे कहिल्यै, "ठिक छ, अब म ट्रांजस्टर सिक्न जाँदै छु। "बरु म यो कसरी निर्माण गर्न आंकडा गर्न प्रयास थियो म साँच्चै मनपराएका र सिकेका एउटा विचार थियो.
लागि प्रेरणा के थियो इन्टरनेट तर्क बारेमा तपाईंको नवीनतम भिडियो?
इमान्दार हुनु पर्दा, एक लागि मेरो प्रेरणा थियो: "ओह बेइमान, म यो हप्ताको लागि एक भिडियो आवश्यक छ। "अनि त्यसपछि म मेरो साथी म प्राप्त सबै विवाह प्रस्ताव लागि एक facerolling रोबोट बनाउन पर्छ भनेर टिप्पणी गरेका थिए कि सम्झना. थाहा थिएन facerolling भनेर अघि कुरा थियो. इन्टरनेट एक अजीब ठाउँ छ.
यसलाई कसरी लामो तपाईं रोबोट बनाउन गर्छ?
साँच्चै निर्भर. को परियोजनाहरूको केही म केवल मलाई एउटा रोबोट हात प्रोग्रामिंग छन् गर्छन्, को लिपस्टिक रोबोट जस्तै, यो नाश्ता मिसिन र facerolling रोबोट. ती काम को दिउँसो जस्तै हो. अन्य परियोजनाहरू, यस ताली मिसिन जस्तै, पूर्ण-समय एक दुई सप्ताह शायद छन्.
तपाईं कुन हालसम्म बनाएको आफ्नो मनपर्ने रोबोट छ?
यो विचित्र र डरावना सिद्ध संयोजन किनभने म मन को ताली मिसिन. म यसलाई अन्य हप्ता पूरा र यो अमूल्य थियो देख मान्छे प्रतिक्रिया बस चढेर.
यो अब तपाईंको पूरा समय काम छ?
हो यो छ! मेरो काम हालसम्म एक शङ्का मेरो सबैभन्दा आविष्कार बिना छ. म सिर्फ म थियो गर्नुभएको सबै नियमित जब मेरो प्रेरणा हत्या गरेका छन् भनेर बुझे. म सधैं म आफैलाई कठिन धक्का र यसलाई मा आफैलाई बढी राख्न भने यो धेरै रमाइलो बन्न चाहन्छु भनेर लाग्यो, तर म जब म मेरो आफ्नै परियोजनाहरुमा काम जस्तै स्पार्क प्राप्त गर्न सकेनौं. त्यसैले म मेरो रणनीति परिवर्तन र यसको सट्टा साँच्चै फिट भएन कि एक मोल्ड मा आफैलाई धक्का प्रयास को, म सिर्फ मोल्ड परिवर्तन गर्न प्रयास चाहन्छु लाग्यो. म सैन मा मेरो काम अन्त्य, स्टकहोम फिर्ता सारियो, मा बस्ने 0.5 डाटा को जीबी एक महिना र बस सामान मा काम गर्न सकेसम्म माथि धेरै समय मुक्त गर्ने प्रयास मलाई लाग्यो मजा थियो. यो कुरा तिनीहरूले छ बाटो बन्द लिन भनेर मेरो योजना कहिल्यै, म सिर्फ सामान मा काम गर्न चाहन्थे म बारेमा उत्साहित थियो, र स्पष्टतः अन्य मानिसहरूलाई पनि तिनीहरूको बारेमा उत्साहित थिए!
तपाईंको अर्को रोबोट के?
गोप्य! यो मेरो सबैभन्दा ठूलो मूर्तिहरू को एक साथ एक सहयोग छ र म यो अझै मेरो सबैभन्दा हुन गइरहेको लाग्छ. मार्च को अन्त मा बाहिर कहिलेकाँही हुनेछ!
तपाईं अझै समय / कौशल / लागि पैसा छैन भनेर आफ्नो सपना रोबोट परियोजना के?
एक पनडुब्बी houseboat. म एउटा पुरानो जहाजलाइ तान्ने शक्तिशाली नाउ लाइभ तर एक पनडुब्बी भएको अर्को स्तरमा हुनेछ भन्ने महसुस.
तपाईं आफ्नो भिडियो र रोबोट कला रूपमा देख्नुहुन्छ?
के छैन, निश्चित छैन. कला मलाई scares. म एउटा कलाकार हुन सुन्दर पर्याप्त महसुस छैन.
शीर्ष 10 QUENTIN Tarantino दृष्य
लामो समयदेखि साझेदार विवाह गर्न Elton यूहन्ना
काँस biopic जांच Yves Saint Laurent अँध्यारो पक्ष
"तपाईंको eBay बिक्री डबल मा 30 दिन!"
18093	4 अम्बर Jamieson, लेख, विशेषताहरु, रोबोट, प्रविधि, YouTube
← सबैभन्दा उपयोगी, एक कार मा विशेषताहरु पर्छ-छ [Ranka] यो 25 मुश्किल भिडियो को सबै समय खेल →
कसरी तपाईंको Android फोन बाट मेटिएको तस्वीरहरु पुन: प्राप्त गर्न?
अगस्ट 10, 2018
Samsung शुरूआत ग्यालेक्सी नोट9ठूलो स्क्रिन र Fortnite संग
अगस्ट 9, 2018
म कसरी Alexa देखि सर्वश्रेष्ठ प्राप्त गर्नुहुन्छ?
जो ThinkPad गर्नुपर्छ म मेरो MacBook एयर प्रतिस्थापन गर्न खरीद?
माइक्रोसफ्ट सानो शुरूआत, को आईप्याड प्रतिद्वन्द्वी गर्न जाओ सतह